काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ? - Naya Pageकाठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ? - Naya Page
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ?
काठमाडौं, १३ असार । काठमाडौं उपत्यकामा यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञा आज (आइतबार) राति १२ बजे सकिंदैछ । यसैले उपत्यकामा फेरि एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको छ । दोस्रो चरणको महामारी मत्थर भए पनि कोरोनाको खतरनाक डेल्टा प्लस भेरियन्ट पाक्ष्इएका कारण संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।